0 Tuesday April 21, 2020 - 14:02:34
Hoos udhac Taariikhi ah oo ku yimid qiimaha lagu iibsado Shidaalka Mareykanka.
0 Tuesday April 21, 2020 - 12:23:41
Waxaa si lama filaan ah dhulka ugu hoobtay qiimaha lagu kala iibsado shidaalka cayriin ee gudaha wadanka Mareykanka.
Shaqaaqo khasaara dhalisay oo ka dhacday magaalada Garoowe.
0 Tuesday April 21, 2020 - 12:10:11
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya iska hor'imaad khasaara dhaliyay oo xalay ka dhacay gobolka Nugaal ee dalka Soomaaliya.
Weeraro Askar badan lagu dilay oo ka dhacay deegaanno katirsan Sh/Hoose.
0 Monday April 20, 2020 - 19:35:14
Warar faah faahsan ayaa kasoo baxaya weeraro saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanno katirsan gobolka Sh/Hoose.
0 Monday April 20, 2020 - 13:56:54
Akhristayaal waxka yar 4 maalmood ayaa naga xigtay bisha Barakeysan ee Ramadaan oo ah muusim cibaado oo allaah naarta ka xureeyo addoomadiisa muslimiinta ah.
Qaraxyo Lix gaaraya oo ciidamada Itoobiya lagula beegsaday duleedka Bardaale.
0 Sunday April 19, 2020 - 20:18:09
Khasaara lixaad leh ayaa ciidamada Xabashida Itoobiya kasoo gaaray weeraro hor leh oo lagula beegsaday gobolka Baay ee dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya.
Weerar Madaafiic ah oo lagu qaaday Madaarka Caalmiga Muqdisho.
0 Sunday April 19, 2020 - 20:15:35
Jugta qaraxyo is xigxigay ayaa caawa maqribkii laga maqlay dhanka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Muqdisho.
0 Sunday April 19, 2020 - 18:53:36
Mid kamida shakhsiyaadka ugu caansan wadanka Austria ee qaaradda Yurub ayaa ku dhawaaqay in uu islaamay uuna ka baxay gaalnimadii uu muddo sanada ah kusoo jiray.
0 Sunday April 19, 2020 - 12:34:00
Wararka ka imaanaya gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in weeraro khasaara dhaliyay markale lagu qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda.
0 Sunday April 19, 2020 - 10:59:08
0 Saturday April 18, 2020 - 20:16:40
Wararka ka imaanaya wadanka Mareykanka ayaa sheegaya in markale kumanaan kun oo ruux ay maalin qura ugu dhinteen cudurka dilaaga ah ee Carona Virus.
0 Saturday April 18, 2020 - 19:59:51
Carona oo 37 kun oo qof American ah ku dilay dalka Mareykanka.
0 Saturday April 18, 2020 - 11:26:52
Waxaa sare usii kacaya dadka cudurka dilaaga ah ee Carona Virus ugu dhimanaya gudaha wadanka Mareykanka.
0 Saturday April 18, 2020 - 09:24:09
Mid kamida xildhibaannada baarlamaanka dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku geeriyooday isbitaal kuyaal magaalada Muqdisho.
Dhageyso: Barnaamijka Diiradda Jimcaha Oo Looga Hadlay Soo Dhaweynta Ramadaan.
0 Friday April 17, 2020 - 12:39:29
0 Thursday April 16, 2020 - 19:58:45
Guddiga doorashooyinka uqaabilsan dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si kulul ubeeniyay in dib loo dhigi doono doorashooyinka madaxtinimada iyo kuwa baarlamaaniga ah ee dhici doono sanadka soo socda.
Dhagayso:Sideen usoo dhoweynaa Bisha Barakeysan Ramadaan Q.1aad.
0 Thursday April 16, 2020 - 13:20:25
Akhristayaal waxka yar 6 maalmood ayaa naga xigtay bisha Barakeysan ee Ramadaan oo ah muusim cibaado oo allaah naarta ka xureeyo addoomadiisa muslimiinta ah.
0 Thursday April 16, 2020 - 13:19:25
0 Thursday April 16, 2020 - 13:02:37
Koox Jawaasiis ah oo lagu dilay degmada Jamaame ee Jubbada Hoose.
0 Wednesday April 15, 2020 - 20:32:37
Markale Xarakada Al Shabaab ayaa dil wadareed ku fulisay kooxo Jawaasiis ah oo u shaqeynayay sirdoonno maxalli ah oo ay leeyihiin maamullo la shaqeeya shisheeyaha kusoo duulay Soomaaliya.
Dowladda Kenya oo xaqiijisay in 6 Askari looga dilay weerar ka dhacay Wajeer.
0 Wednesday April 15, 2020 - 12:15:51
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar qorshaysan oo dagaalyahanno katirsan Xarakada Shabaabul mujaahidiin ay maalin ka hor ka fuliyeen mid kamida deegaannada dhulka NFD ee kujira gummeysiga dowladda Kenya.
« Prev1 ... 10111213141516 ... 353Next »